Omar Suleiman | Freedom News Group
အာရပ် နိုင်ငံ များ ၏ အုံကြွမှု များ တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ကူးစက် နိုင်
Middle East Unrest Shock Undemocratic Countries
With Hosni Mubarak stepping down in Egypt, tyrants around the world may be anxiously wondering who will be the next to fall.
အာရပ် နိုင်ငံ ရဲ့ ပြည်သူလုထု အုံကြွမှု တွေ ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ကို ကူးစက် နိုင်ကြောင်း နိုင်ငံ
စုံက တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခတွေ ၊ နိုင်ငံရေး ပိုင်းခြား စိတ်ဖြာသူတွေ၊သံတမန် ဟောင်းတွေ
ပါဝင်တဲ့ The Economist မဂ္ဂဇင်း ရဲ့ဥာဏ်ကြီးရှင် အဖွဲ့ ဖြစ်တဲ့ Economist Intelligent Unit
က ပိုင်းခြား သုံးသပ် ထား ပါတ်။ ဒီအဖွဲ့ ကြီး ဟာ ၁၉၈၇ ခုနှစ် မှာ လည်း သံကန်လန့် ကာ
နောက်ကွယ်ကနိုင်ငံတွေ မှ လူထု အုံကြွမှု တွေ ဖြစ်ပွား နိုင်တာနဲ့ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု
ပြိုကွဲ နိုင်တာ ကိုဟောကိန်း ထုတ် ခဲ့ ဖူးပါတယ်။ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Like this:Like Loading...	Feb 11
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Like this:Like Loading...	Jan 30
5 Comments	မူဘာရက် အာဏာ စွန့် သည်အထိ ဆက်လက်ဆန္ဒပြ မည်
နိုဘဲလ် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုရှင် မိုဟာမက် အယ်(လ)ဘရာဒီ က ဆန္ဒပြ သူများ ကို မိန့် ခွန်းပြော
ခဲ့ရပါတယ်။ Read more
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်Like this:Like Loading...	Graphic showing current human rights concerns in Myanmar. #Malala Day Dining & Wine Discover wines from around the world
FNG Facebook PageTotal Visitors:Since 16 December 2008	9,510,924 hits
#Nelson Mandela should born and raise in Utah. lnkd.in/b-mPUbP 38 minutes ago